Ngokobuchwephesha indawo inzima kwaye izahlulo ezahlukileyo zihlaziywa ngeveki. Ngamanye amaxesha uhlaziyo lwekhowudi lunokungqubana ne-cache egcinwe kwifowuni yakho apho isikhangeli sakho singafumani uhlaziyo lwephepha apho ngenxa yesiphelo sethu, ubuchwepheshe buye bahlaziywa. Xa sikhupha uhlaziyo sizama ukucoca i-cache esecaleni kweseva enyanzela isikhangeli sakho ukuba sihlaziye. Kodwa ngamanye amaxesha oko akunyanzeli ukuba uhlaziyo lwe-cache yakho lukhawuleze. Sivavanya kwizikhangeli ezi-6 ezahlukeneyo kwaye azizenzi zonke ngokulinganayo.
Ke, umthetho wokuqala olungileyo wesithupha ngowokuqala, gcina yonke into oyivulileyo, emva koko uqalise isixhobo sakho. Okulandelayo, ukuba umbandela uyaqhubeka, cima indawo yokugcina yakho isikhangeli, yivale kwaye uyivule kwakhona. Ukuba isaqhubeka sebenzisa le fomu kwaye usazise. Siyabulela ukuba usinceda ukuba siyenze indawo igqibelele njengoko inokwenzeka kuye wonke umntu. Sithumele inkcazo eneenkcukacha kwaye ukuba ungabandakanya izikrini ezihlala zinceda. Sihlala siphendula ngokukhawuleza kwangolo suku lunye, kodwa kuxhomekeke kwixesha elithunyelweyo kunokuba lusuku olulandelayo.
- Khetha iSebe -Imiba yokuNgenaIngxelo ngeSizaOmnye uMba weTekhnoloji
Enye inkcazo malunga neli candelo
Ukuba ixhomekeke kwakhona nceda unikeze i-URL kwiphepha elichaphazelekayo.
Ukuba kunokwenzeka, nceda ungenise ukuya kufikelela kwezi-5 kwisikrini